Qarax Askar Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Duleedka Magaalada Baydhaba. – Bogga Calamada.com
Last updated Oct 13, 2021 0
Faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax aad u xooggan oo gelinkii dambe ee maanta ka dhacay deegaan hoos taga magaalada Baydhaba ee wilaayada Bay waxaana qaraxaas fuliyay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul Mujaahidiin.
Qaraxa oo jugtiisa si wayn looga maqlay gudaha deegaanka iyo duleedkiisa waxay ciidamada Mujaahidiintu si gaar ah ula beegsadeen askar ka tirsan ciidamada maamulka ashahaada la dirirka Koonfur galbeed xilli ay ku sugnaayeen goob fariisin ah oo kutaal deegaanka Goofgaduud Buurey ee duleedka degmada Baydhaba.
Ilo wareedyo masuul ah oo ka agdhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay waxay xaqiijiyeen in qaraxaas uu ku dhintay hal askari oo murtad ah oo lagu magacaabi jiray Boorow Ubaay halka sidoo kalena uu ku dhaawacmay askari kale.
Askariga kale ee qaraxa ku dhaawacmay waxaa magaciisa lagu sheegay Yuusuf Aadan oo isna ka mid ahaa ciidamada maamul goboleedka koonfur galbeed kaas oo sida la sheegay dhaawiciisa loola cararay goobaha caafimaadka.
Qaraxan ka dhacay duleedka magaalada Baydhaba waxa uu qayb ka yahay howlgallada xiriirka ah ee ay sida xowliga ah Mujaahidiintu uga wadaan deegaammada iyo degmooyinka ay wilaayada Baay kaga suganyihiin ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka ku daaban ee murtadiinta.